के आफ्नै औंलाले शरीर नाप्दा आफ्नो आयु थाहा हुन्छ ? जान्नुहोस « Pariwartan Khabar
के आफ्नै औंलाले शरीर नाप्दा आफ्नो आयु थाहा हुन्छ ? जान्नुहोस
10 February, 2018 2:39 pm
एजेन्सी । शास्त्रमा भनिएको छ कि हरेक ब्यक्तिको जन्मका साथ नै मृत्यु पनि तय हुन्छ । हरेक मानिसले जन्मसँगै मृत्युको मिति समेत लिएर आएको हुन्छ । यद्यपी यो जीवन र मृत्युको रहस्यबारे भविष्यवाणी भने हरेक मानिसलाई चासोको विषय हुन्छ ।
शास्त्रमा यो प्रश्नको जवाफ दिइएको छ । हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगले नै हाम्रो आयुबारे भविष्यवाणी गर्न मद्दत गर्ने शास्त्रको भनाइ छ ।समुन्द्रशास्त्रका अनुसार हातको रेखा र निधारको रेखाले आयुबारे जानकारी दिन्छ ।